Qoys qiyaamaha god dhexdiisa ku sugayay oo lasoo helay |
Qoys qiyaamaha god dhexdiisa ku sugayay oo lasoo helay
Booliska dalka Netherlands ayaa soo helay qoys sagaal sano ku jiray dhulka hoose ee dhismo ku yaala gobolka Drenthe, kuwaas oo la sheegay inay sugayeen in qiyaamaha uu u dhaco.
Wararka ayaa sheegaya in laamaha ammaanka ay arrintan ka war heleen, ka dib markii mid ka mid ah dadkaas uu bannaanka usoo baxay, laguna arkay baar lagu caweeyo.
Ninkan oo da’diisu tahay 58 sano jir, qoykiisana ay ka mid yihiin dad ay da’dooda u dhexeyso 18 iyo 25 sano, ayaa ku noolaa guri hoos u dhisan oo ku dhex yaalla beer ku taala gobolka Drenthe.
Curadka qoyska ayaa la sheegay in uu bannaaka khamri usoo doontay.
Shaqaalihii baarka ayaa telefishenka RTV u sheegay in ninkan uu doonayay in dadka ay caawiyaan. Ninkan oo markii hore la xiray ayaa la moodayay in uu yahay aabaha dhalay caruurta laga soo helay godka.
Warbaahinta dalkaas ayaa kusoo warrantay in qoyskan ay halkaas ku jireen in muddo ah, iyagoo sugayay qiyaamaha. Warar aan la xaqiijini ayaa sheegaya in dadka la helay uu ka mid yahay aabaha caruurtaas.
Milkiilaha baarka Chris Westerbeek, ayaa fahfaahiyay sida ninkan uu ku yimid, kuna dalbaday shan dhalo oo khamri ah oo uu markiiba cabay.
“Waa la sheekeystay, oo wuxuu ii sheegay in uu soo baxsaday, oo uu u baahan yahay in la caawiyo… ka dibna waxaan u yeernay booliska,” ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray: ” Wuxuu lahaa timo dhaadheer, gar dheer, wuxuuna xirna dhar duug ah, oo wuxuu u muuqday qof wareersan. Waxaa kale oo uu sheegay in uusan waligii iskool aadin, wax khamri ah na uusan cabin mudo sagaal sano ah.”
“Wuxuu sheegay inay la dhasheen gabdho iyo wiilal oo uu kula noolaa beerta, waxaa kale oo uu sheegay in uu yahay curadka, doonayayna in uu ka baxo nooloshaas.”
Saraakiisha dowladda ayaa booqday beeerta, waxayna halkaa ka sameyeen baaritaan. Waxay soo ogaadeen jaranjar ku taala qeybta dambe ee armaajada qolka, markii ay raacenna waxay soo arkeen halka ay ku nool yihiin inta kale ee qoyska.
Tuulada Ruinerwold ee qoyskan ay ku noolaayeen waa tuulo ay ku nool yihiin dad ka yar 3,000 oo qof. Qosykanna waxay degganaayeen meel duleedka ka ah Tuulada oo u dhow buundo wayn.
Dhismaha ay ku noolaayeen waa mid qarsan oo geedo ay dabooleen, sidoo kale waxaa ka dul baxay qudaar, xeen yar oo ari ahna way haysteen.
Qof ka mid ah dadka deriska ayaa warbaahinta u sheegay in waligiiba uu halkaas ku arki jiray hal nin, oo uusan arkin wax caruur ah. Wuxuu intaa raaciyay in sidoo kale uu arki jiray shimbiro iyo eey.
Mid ka mid ah dadka guryaha geeya waraaqaha Boostada ayaa sheegay in waligii uusan wax warqad ah geynin halkaas, wuxuuna yiri “Waa arrin la yaab leh, hadda unbaa ogaaday arrintaas”.
Dadka deegaankaas ayaa arrintan aad u hadal hayay. Mid ka mid ah weriyayaasha wuxuu sheegay in loogu baaqay inay ka fogaadaan dhismahaas.
Booliska Magaalada Drenthe ayaa xaqiijiyay in ay xabsiga u taxaabeen 58 sano jirkan, haatan uu ku socdo baaritaan, ka dib markii uu diiday in uu booliska kala shaqeeyo arrintan.
“Qof ayaa shalay inoo sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda noolaleed ee dadka deegaanka, ka dibna waxaan tagnay halkaas.” Sidaas waxaa sheegay booliska.
Saraakiisha amniga waxaa kale oo ay shegeen in weli waxbadan aysan kala cadeyn walina ay ku hawlan yihiin baaritannada la xiriira arrintan.
Booliska ayaa isku gedaamay oo xiray halkii uu ku yaalo dhismahan.
Wali ma cadda mudada ay qoyskaas ku noolayeen dhulka hoose ee dhismaha iyo waxa ku dhacay hooyadood, inkastoo duqa deegaankaas uu sheegay in hooyada ay dhimatay waa hore.
Warar kale oo la helayna waxay sheegayaan in ninka 58 jirka ah uu ku dhacay xanuunka shalalka ama Stroke loo yaqaano, haddana la daweynayo.